သင်မြင်ချင်တဲ့ NLD အမှတ်တံဆိပ်အသစ်က ဘာလဲ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » သင်မြင်ချင်တဲ့ NLD အမှတ်တံဆိပ်အသစ်က ဘာလဲ…
သင်မြင်ချင်တဲ့ NLD အမှတ်တံဆိပ်အသစ်က ဘာလဲ…
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Nov 25, 2011 in Myanma News, Opinions & Discussion | 19 comments
လက်ရှိ အဖွဲ့ချုပ် အလံနှင့် အမှတ်တံဆိပ်
အန်အယ်ဒီပါတီ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ နေပြည်တော်မှာ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆောင်ရွက်နေပါပြီ။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် ပါတီအလံကို အနည်းငယ်ပြင်ဆင် အသုံးပြုမယ် ဆိုပါတယ်။ မူလအမှတ်တံဆိပ် ခမောက်ကို အန်ဒီအက်ဖ်ပါတီက ယူသွားလို့ အသစ်ရွေးရမှာပါ။ တိုင်းရေးပြည်ရေး ဘယ်တော့မှာ လက်မနှေးလေ့ရှိတဲ့ ရွာသားများလည်း မိမိနှစ်သက်ရာ အမှတ်တံဆိပ်ကို အခုမဟုတ်တောင် နောက်ပိုင်းကာလမှာ အသုံးပြုဖို့ ရွေးချယ်ဆန္ဒပြုပေးကြရင် ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘယ်အကြောင်းကြောင့် ဘာကိုရွေးတယ်ဆိုတာပါ ရေးပေးနိုင်ရင် ပိုအထောက်အကူ ပြုပါလိမ့်မယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေအရ လူနာမည်၊ လူပုံများ (ဥပမာ – ဒေါ်စုဓာတ်ပုံ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဓာတ်ပုံ) သုံးခွင့်မရှိပါဘူး။ ကျနော်လည်း ဘယ်လိုဝင်နှောက်ရမလဲ စဉ်းစားနေတုံးပါ။
လက်ရှိအမည် – အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (national league for democracy)
လက်ရှိတံဆိပ် – ခမောက်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ဗဟိုကော်မတီစာရင်း (ကိုမိုးသီးဘလော့မှ ရယူသည်)
၂၂။ ဦးကြောင်ကြီး (ယူဂျီ) :cool:
ဟာ……ဒို့ရွာထဲက ကြောင်သူပုန်ဗိုလ်ကြီး အဖွဲ့ထဲပါ သ ဟ
ကိုကြောင်ကြီးနာမည် စာရင်းထဲမှာထည့်ထားတာ ဂယ်လား၊အတည်လား၊ရှင်းစမ်းပါဦး။
ဂယ်ဆိုရင်တော့ ကြောင်အဖွဲ့သားတွေအတွက် ဂုဏ်ယူစရာပဲ။ ကိုကြောင်ကြီးဘယ်နယ်မြေကနေအရွေးခံမလဲ၊ကျ နော်မဲထည့်ချင်လို့။
ကလန်တုန်းကတော့ မီးကုန်ရမ်းကုန် ကလန်ပြီးတော့
ရော့ နွားလှည်း ဆယ်စီး
ရော့ အညာတိုက်ကြက် ဆယ်ကောင်
ရော့ ကန်စွန်းရွက် ဆယ်စီး ( သက်သတ်လွတ်စားဘို့ )
ရော့ ဒညင်းသီးအိုးစိမ် ဆယ်အိုး
ရော့ မျှစ်ချဉ် ဆယ်ပိသာ
ရော့ သစ်တိုသီးအိုးစိမ် ဆယ်အိုး
ရော့ အသားတု ဆယ်ပိဿာ
ဂြိုလ်တုလွှတ်မယ် ဖုံးလိုင်းထောင်မယ် ဒက်ဂလောက် ဒက်ဂလောက်
ယူဂျီ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ( ငြိမ်း ) ဦးကြောင်ကြီး ၀င်အရွေးခံပြီဟေး…..
ကြိုတင်မဲအများဆုံးနဲ.နိင်မှာ သေချာနေပြီဗျို. …….
တံဆိပ်ကို ကြောင် မီးတုတ်ကိုင်ထားတဲ.ပုံ လုပ်ပါဗျို……..
မနောက်ပါနဲ့၊ အတည်ပြောကြပါဗျ။ ရွာထဲမှာ တတ်သိနားလည်သူများ၊ အလုပ်ကြီးအကိုင်ကြီး လုပ်နေသူများ၊ ဂြိုလ်ကြောင်သတ္ထု – မားကက်တင်း mar-cat-tin ဆရာထဲမှာဆိုရင်လည်း ကိုဂီနဲ့ကိုနက်ချော ရှိတာပဲ။ နိုင်ငံရေး အမြင်နဲ့ မဟုတ်တောင် စီးပွားရေးအမြင်၊ ဈေးကွက်အမြင်၊ မိမိတတ်ကျွမ်းနားလည်ရာ ရှုဒေါင့်ကနေ အကြံပေးလို့ရပါတယ်။
ကျနော့်အမြင်က အသစ်ဖွဲ့စည်းတော့မဲ့ ပါတီအလံ၊ တံဆိပ်များကို အောက်ပါအတိုင်း အကြံပြုချင်တယ်…
(၁) အန်အယ်ဒီ အလုပ်မှုဆောင်ဖွဲ့စည်းပုံ အသစ်မှာ အမျိုးသမီး တဝက်ကျော်ပါတယ်။ လူငယ်လူလတ်ပိုင်း အများစုဖြစ်တယ်။ အောက်ခြေအဆင့်ဆင့်ကိုလည်း အဲသလိုပဲ သွေးသစ်လောင်းဖို့ ကြိုးစားမယ်ထင်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ပါတီသည် ငယ်ရွယ်နုပျို ဖြတ်လတ်တဲ့ ပုံရိပ်ထင်ဟပ်ပြရမယ်။
(၂) မိမိအခြေခံထား စည်းရုံးမဲ့ လူထုအတန်းအလွှာ အသီးသီးကိုလည်း ထင်ဟပ်ရမယ်။ မြို့ပြနဲ့ကျေးလက် နှစ်ခုစလုံး စပ်ဆက်နိုင်ရင် ကောင်းမယ်။ ၁၉၉၀ခုနှစ်မှာ သုံးတဲ့ ခမောက်သည် ကျေးလက်ကို ပိုကိုယ်စားပြုတယ်။ အနှစ်၂၀ကျော် ကြာပြီးနောက် မြို့ဆန်သူများ ပိုများလာသလား (ပိုချမ်းသာလာသည်ဟု မဆိုလိုပါ)။ ခမောက်လို အသုံးအဆောင်မျိုးကို ရွေးခဲ့လို့ နိုင်ငံအဝှမ်း မဲဆွယ်ပွဲများလုပ်တဲ့အခါ လူထုအမြင်ကစလို့ ရှာဖွေဝယ်ယူရေးပိုင်းအထိ အားသာချက်၊ အားနည်းချက် ဘာတွေရှိခဲ့သလဲ။ ပိုကောင်းတာ ရှိနိုင်မလား။ ၁၉၉၀ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာ ရန်ကုန်ကို နယ်ကတင်ပို့လိုက်တဲ့ ခမောက်တင် ကုန်ကားများ အသိမ်းခံရတာ ရှိခဲ့ဘူးတယ်။ လွယ်လင့်တကူ ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်ရွာမှာ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ အရာမျိုး၊ အလွယ်တကူ သယ်ဆောင် အသုံးပြုနိုင်တာမျိုး ဖြစ်သင့်တယ်။ စီးပွားရေးအရလည်း တွက်ခြေကိုက်ရမယ်၊ လူမှုရေးပိုင်းမှာလည်း လှပတင့်တယ်ရမယ်။ နိုင်ငံရေးအရလည်း အဓိပ္ပါယ်ရှိရမယ်။ ခေတ်ကာလကြီးက mobility ဆိုတဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရွှေ့ပြောင်းအသုံးချတာ နှစ်သက်တဲ့ ခေတ်ဆိုတာ ထည့်သွင်းစဉ်းစာပါ။
(၃) ပြိုင်ဖက်များရဲ့ ပုံရိပ် အမှတ်အသားကိုလည်း ကြည့်ရမယ်။ ကြံ့ဖွတ်၊ တစညနဲ့ အခြားဖြစ်နိုင်ခြေရှိ ပြိုင်ဖက်များရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်။ နောက်အရေးကြီးတဲ့ အစုက စစ်တပ်ဖြစ်တယ်။ သူတို့နဲ့ သဟဇာတဖြစ်တဲ့ အမှတ်အသားကို ရွေးဖို့အရေးကြီးတယ်။
(၄) တိုင်းရင်းသား၊ လူနည်းစု အစုများရဲ့ အမြင်၊ ယုံကြည်ချက်များနဲ့ ပဋိပက္ခမဖြစ်ဖို့ သတိပြုရမယ်။ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ အယူအဆရေးများအပေါ် အခြေမခံသင့်ဘူး။
(၅) နိုင်ငံတကာ အမြင်မှာ သိပ်အယူဝါဒ ပြင်းထန်လွန်းတယ် မမြင်မိစေချင်ဘူး။ အနီသုံးများလွန်းရင် လက်ဝဲဆန်သွားမယ်။ အဝါသိပ်များရင် အမျိုးသားရေး၊ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်တယ် ထင်သွားမှာ စိုးရတယ်။ ဒါကြောင့် စစ်တပိုင်းအစိုးရက နိုင်ငံတော် အလံအသစ်ကို သုံးရောင်စပ် ပြောင်းလိုက်တာ တကြောင်းဖြစ်မယ်။ သိပ်ကိန်းခန်းကြီး ပြန်ရင်လည်း အများအမြင် ရယ်စရာဖြစ်မယ်။
(၆) အဓိပ္ပါယ် အနှစ်သာရ တိတိကျကျ ဖွင့်ဆိုနိုင်တဲ့ အမှတ်အသား ဖြစ်ရမယ်။ သဂျီးမွေးဖွား ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်လို့ ကွန်ဆားဗေးတစ် သိပ်များတာမို့ လိုအပ်ရင် ဗေဒင်ကိန်းခန်း ယတြာအမြင်များနဲ့ပါ ဝေဖန်စရာ မဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်သင့်တယ်။ အယူသီးခြင်း မသီးခြင်းထက် အများမကြိုက်လို့ ပြင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခါ လုပ်ရတာ အတော်ဂွကျမယ်။ ခွပ်ဒေါင်းအလံတောင် အောက်ဆိုက်နေတယ်ဆိုလို့ အပေါ်ပြန်မော့ပေးရတယ် ထင်တယ်။ လက်ရှိပါတီအလံလည်း ဒီလိုပဲ ကြယ်ကြီးကို သွားထိုးဆိတ်သလို ဖြစ်နေတယ်။ အကောင်းအဆိုးကို အခွင့်သာတုန်း ပြန်လည်ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ ပြောတာပါ။ မှားတယ် မှန်တယ် ကောင်းတယ် ဆိုးတယ်က ကာယကံရှင်များ ပိုသိပါတယ်။။။။။။။
ဗိုလ်ချုပ်ဦးထုပ် ဆောင်းထားတဲ့ ကြောင်ပုံ ကော မလုပ်ချင်ဘူးလား ဟင် ကိုကိုကြောင်
ကိုကိုကြောင်ရေ၊ ဘယ်လိုအကြံပြုပြု ထုံးစံအတိုင်း သူရို့ အဖွဲ့ကပဲ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ပါလိပ်မယ်ဗျား။
တိန်တောင်— တိန်တောင် — ဒေါင် ဒေါင် ဒေါင်း—– ဒေါင် ။
ဗဟိုဦးစီးစာရင်းတွင် ကိုကြောင်ကြီးအမည်ပါလာသဖြင့်၊ကျနုပ်၏အိမ်သို့ ကြွက်လာလာချောင်းသော- ကြောင်မကလေး မိဖြူကို ဂျီမေးဖြင့်ယ္ခုလှမ်းမေးပြီး ဗျူးကြည့်ရာ ကိုကိုကြောင် ကို ကွန်ကရက်ကျူလေးရှင်းပါ
ယူအက်စ်မှာ.. ဒီမိုကရက်ပါတီက.. ဆိတ်…
မြန်မာပြည်က.. ဒီချုပ်က.(ရွေးခွင့်သာရှိမယ်ဆိုရင်)…” ကဒေါင်း” ရွေးပေါ့…။
ကဒေါင်းမရေးခင်.. ဧရာဝတီလင်းပိုင်ရေးမလို့.. သေသေချာချာကို.. စဉ်းစားဖြစ်လိုက်သေးတယ်..။
နောက်ဆုံးတော့လည်း ကိုယ့်ငါးချဉ် ကိုယ်ချဉ်လိုက်တယ်ပေါ့…
ကျုပ်တော့ ရောဂါရပီလား မသိဘူး
ဒီနာမည်သုံးရင် ရောဂါရှင်လို့ ဟိုဝန်ဂျီး ကပြောထားတယ်မလား..
ကိုရင်ကတော့ ခွပ်ဒေါင်းကို ပြန်မသုံးစေချင်တော့ဘူး..
ရှေးပုဂံမင်းများ အာဏာထွားခဲ့ကြတဲ့ တိုက်ကြက်ဖကို
အလံတံဆိပ်အဖြစ်သုံးရင် တစ်မျိုးများ ဆန်းနေမလား..
ကြက်အိပ်ကြက်နိုး အလုပ်လုပ်ရမယ်.. (အမြဲနိုးကြားနေရမယ်)
ကြက်တွန်သံလို့ အမြဲ သြဇာရှိနေရမယ်…
ကြက်မတစ်ဝပ်စာနေရာ အမြဲတမ်း ပါတီအတွက်ရှိရမယ်
ကြက် ဆန်စေ့တစ်စေ့ချင်းဆီစားသလို စေ့စေ့စပ်စပ် စားရမယ်။
ဒီတော့.. ကျွန်တော်ကတော့ ကြက်ကို တံဆိပ်လုပ်တာ ထောက်ခံတယ်။
သောကြာနံတွေကို တင်္နလာနဲ့ ခွပ်တာအကောင်းဆုံးပဲဗျို့…
ထောက်ခံပါတယ် ဆရာလေး (သီလရှင် မဟုတ်ပါ) ဂီဂီ။
်ခမောက်ထိပ်မှာကြယ်တပ်၊ ခမောက်ကို စပါးနှံတွေ ရံပေးလိုက်။ တစ်ဖက်ကို ( ၁၇ ) ခက်စီ။
မြန်မာ့တွေ ရဲ့ အောင်ပွဲတိုင် မှာ ဒေါင်း ပါနေတယ်။ ဒီတော့ အကောင်က ဒေါင်းဗျ၊ ဒါပေမဲ့ အားမာန်အပြည့်နဲ့ ခွတ်ဒေါင်းဗျ။ ရှေ့ ကလှပြီးနောက်မှာ ဖင်ပြောင်နေတဲ့ ကဒေါင်းကြီးကျတော့ လဲ စိတ်မသန့် ဘူး။
ကျုပ်ကတော့ အမှတ်သင်္ကေတဟာ အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ သဘောကိုဆောင်စေခြင်တယ်
ဧရာဝတီလင်းပိုင်ကတော့ ရှားပါးသတ္တဝါဆိုတာကလွဲလို့ ဘာမှ
အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူးလို့ မြင်တယ် ကန့်ကွက်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော
အရွယ်တူကြယ်ဖြူဆယ့်လေးလုံး စက်သွားနဲ့ စပါးနှံပေါ့
စပါးကဘာညာ စက်သွားက တရုပ်စက်ပေါ့ ဘာညာ
အိုက်ဒလို ကိုယ်စားပြုတာတွေကို သဘောကျတယ်
ခွပ်ဒေါင်းဆိုရင် ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်ရှိမယ် အိုက်ဒလို လေးလေးနက်နက်လေးတွေကို
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဆင်ဖြူတော်စီးနေတဲ့ပုံကြီးတော့ မတင်သွင်းကြနဲ့နော် ဒါဗျဲ
ဧရာဝတီလင်းပိုင်က ပွဲဆူနေတုန်းသာ ကောင်းမယ်ထင်တယ်၊ ပြီးတော့ ကြေးမုံတို့ အမျိုး တရုတ်ကြီးကို သွားဆွပေးသလို ဖြစ်နေမယ်။ မဟော်သဓာကို သူ့ရန်သူ ပုဏ္ဏားကြီး နဖူးက အမာရွတ် စမ်းမိတိုင်း ဒေါသထွက်သလို ဖြစ်နေပါအုံးမယ်။။။ ကဒေါင်းကြပြန်တော့လည်း အမျိုးသားရေး လက္ခဏာဖြစ်နေလို့ ရွေးဂေါက်ပွဲကော်မရှင်က ပေးမယ်မထင်ဘူး။ အန်အယ်ဒီသည် ပြည်နယ်ပြည်မ အကုန်လုံးကို ခြေဆန့်မယ့် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပါတီကြီးဖြစ်လို့ အားလုံးနဲ့ဆိုင်ရာ လက်လှမ်းမှီရာကို ရွေးသင့်တယ်။ ကျနော် အကြံပြုချင်တာ….
အလံကို လက်ရှိ ကြယ်နဲ့ခွပ်ဒေါင်း ဘေးခြင်းယှဉ်ထား၊ သို့မဟုတ် ကြယ်ဖြူကြီးကို ခွပ်ဒေါင်းဝါက ကန့်လန့်ဖြတ်သွား ဒါမှမဟုတ် ကြယ်ဖြူထဲက ခွပ်ဒေါင်းထွက်လာတဲ့ပုံကို နောက်ခံကာလာ အရောင်စပ်ကြားနဲ့ဆို မကောင်းလား။ အနီရောင်သက်သက်ဆို လက်ဝဲသိပ်ဆန်လွန်းတယ် မြင်ကုန်မှာစိုးတယ်။ တရောင်ထဲဆိုလည်း အပြာရောင် ဆိုရင်ကော။ နေရောင်အစားခံဖို့လည်း ထည့်တွက်သင့်သေးတယ်။
အမှတ်တံဆိပ်ကိုတော့ ဖယောင်းတိုင်(အဖြူ) မီးထွန်းထားတဲ့ပုံ (သို့မဟုတ်) ဖယောင်းတိုင်(အဖြူ)ကို လက်ကနေ မီးထွန်းညှိပေးနေတဲ့ပုံကို သုံးမယ်။ မြန်မာပြည်မှာ တော်တော်နဲ့ လျှပ်စစ်မီးအပြည့်အဝ မရမှာ သေချာလို့ နောင်အနှစ်၂၀လောက်တော့ အိုကေမယ်ထင်တယ်။ ပြီးတော့ ဖယောင်းတိုင်မီးကို ဘာသာမရွေး ဘုရား၊ကျောင်းကန် ပွဲလမ်းသဘင်များမှာ အစဉ်အလာ အသုံးပြုတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်းညှိ ဆုတောင်းပွဲတွေလည်း ခေတ်စားတယ်။ လိုအပ်ရင် လူတိုင်း ကိုယ့်ဆန္ဒကို အနုနည်းနဲ့ ဖော်ပြလို့လွယ်တယ်။
ဖယောင်းတိုင်မီး က တော်တော်များများကို ကိုယ်စားပြုပါတယ် ။
(၁) ပညာ အရောင် ထွန်းလင်းပြောင်ဆိုပြီး ပညာကို လည်း ကိုယ်စားပြုပါတယ်။
(၂) အမှောင် ခွင်းပေးတဲ့ အနေနဲ့လည်း ယူဆနိုင်ပါတယ်။
(၃) နောက်ပိုင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုတောင်းပေးတဲ့ အနေနဲ့လည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခု က ပြသနာ မီးထွန်း ရှာတယ်လို့လဲ တွေးပေးနိုင်တာပေါ့ဗျာ… :grin: